ပြင်သစ်နဲ့စပိန်မှာ အီတလီမှာလိုပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အရေးပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်
ပြင်သစ်နဲ့စပိန်မှာ အီတလီမှာလိုပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်...
15 มี.ค. 2563 - 19:30 น.
ပြင်သစ်မှာ အီဖယ်မျှော်စင်၊ လု(ဗ်ဟ်)ပြတိုက်နဲ့ ဗာဆိုင်းနန်းတော် အပါအဝင် ကော်ဖီဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ အပါအဝင် ဆိုင်အတော်များများကို ပိတ်
ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ အကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်တို့ဟာ အီတလီမှာလိုပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အရေးပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝယ်ဖို့၊ အလုပ်သွားဖို့တွေကလွဲလို့ အိမ်ပြင် မထွက်ဖို့ အစိုးရက ကန့်သတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်မှာဆိုရင် ကော်ဖီဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ အပါအဝင် ဆိုင်အတော်များများကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၉၁ ယောက် ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး အီတလီ ပြီးရင် ဥရောပမှာ သေဆုံးသူ အများဆုံး ရှိနေသလို ပြင်သစ်မှာ အလားတူ ၉၁ ယောက် သေဆုံးမှုကလည်း စပိန်ပြီးရင် အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီမှာတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၄၄၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကစပြီး အီတလီတနိုင်ငံလုံး အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ ဥရောပဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဓိကပြန့်ပွားရာ နေရာဖြစ်လာတဲ့အတွက် လူ့အသက်တွေကို ကယ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ အစိုးရတွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးခြုံပြီး ဆက်စပ် လှုပ်ရှားစေပြီး အများပြည်သူ စုဝေးနီးစပ်မှုတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်သတ်သင့်ပြီး တယ်လို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုကြောင့် အမေရိကန်လေဆိပ်တွေ ဖရိုဖရဲဖြစ်
အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာ
စပိန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အခြေအနေနဲ့ အရေးပေါ် ကန့်သတ်မှုများ
စပိန်မှာ လူဦးရေ ၄၆.၇ သန်းရှိရာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေတယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်သူ ၆၃၀ဝ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
အခုလို ကူးစက်နေသူတွေထဲမှာ စပိန်ဝန်ကြီးချုပ် ပက်ဒရို ဆန်းချက်ဇ် ရဲ့ ဇနီး ဘေဂိုညာ ဂိုးမက်ဇ်ပါ ပါဝင်လာကြောင်း မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ရော သူ့ရဲ့ဇနီးပါ ဝန်ကြီးချုပ် အိမ်တော် မွန်ကလိုအာ နန်းတော်မှာ ရှိနေကြပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းလောက်ကစပြီး မတ်လ ၁၅ ရက် မနက်ပိုင်းအထိ စပိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးနေသူ ၁၈၀ဝ ကျော် ထပ်တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အများစုက မြို့တော် မက်ဒရစ်က ဖြစ်ပါတယ်။
စပိန် နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေအရ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးဝယ်ဖို့နဲ့ အလုပ်သွားဖို့မှအပ အပြင်ထွက်တာကို မစ္စတာ ဆန်းချက်ဇ်က တားမြစ်လိုက်ပြီး ပြတိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုစင်တာနဲ့ အားကစားခန်းမတွေကို ပိတ်လိုက်တဲ့အပြင် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေကိုလည်း အိမ်ကို ပို့ပေးတဲ့ စနစ်နဲ့ပဲ ဖွင့်ဖို့ ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘဏ်နဲ့ လောင်စာဆီဆိုင်လို မရှိမဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ ဖွင့်ထားပြီး ကျောင်းတွေကတော့ တနိုင်ငံလုံးမှာ ပိတ်ထားပါတယ်။
အခုလို အရေးပေါ် အခြေအနေ ကန့်သတ်ချက်တွေကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က စလို့ ၂ ပတ် သတ်မှတ်ထားပြီး လိုအပ်ရင် ပါလီမန် အတည်ပြုချက်နဲ့ ထပ်တိုးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ၁၉၇၅ မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ စပိန်အတွက် ၂၀၁၀ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာမှု ပြီးရင် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
A closed beach in Benidorm on Saturday
ပြင်သစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အခြေအနေနဲ့ အရေးပေါ် ကန့်သတ်မှုများ
ပြင်သစ်မှာ လူဦးရေ ၆၃.၅ သန်း ရှိရာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်သူ ၄၄၀ဝ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ အစောပိုင်း အများပြည်သူ လိုက်နာဖို့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဂရုမစိုက်ကြတာတွေ ရှိခဲ့ပြီး အရေးပေါ် ကုသပေးနေရသူတွေလည်း တိုးလာခဲ့တယ်လို့ ပြင်သစ် ဝန်ကြီးချုပ် အေဒွာ့ ဖီလိ က ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့စပြီး ပိတ်ထားရမယ့် နေရာတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ညကလပ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ တခြား မရှိမဖြစ် မဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပြီး ဆေးဆိုင်၊ ဘဏ်၊ လောင်စာဆီဆိုင်နဲ့ အစားအသောက် အရောင်းဆိုင်တွေကိုတော့ ဖွင့်ထားမယ်လို့ မစ္စတာ ဖီလိက ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်ကျောင်းတွေကတော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က စပြီး လောလောဆယ် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထား
ကျောင်းတွေကတော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က စပြီး လောလောဆယ် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း ဖွင့်ထားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် စုဝေးမှုနဲ့ အခမ်းအနားလုပ်တာတွေကို ရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ အစိုးရက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တမြို့နဲ့တမြို့ ခရီးသွားတာကို လျှော့သင့်ပြီး ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို နှေးအောင် အလုပ်နိုင်ဆုံးက အများပြည်သူ စုဝေး နီးစပ်မှုတွေကို ရှောင်ရှားတဲ့ နည်းလမ်းပဲလို့လဲ မစ္စတာ ဖီလိက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတော့ မဖျက်သိမ်းပဲ ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေသူ တွေ့ရှိမှုက ၃၆၆၁ ယောက်ကနေ ၄၄၉၉ အထိ ခုန်တက်သွားတာ ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူလည်း ၁၂ ယောက် ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၇၉ ယောက် ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတော့ မဖျက်သိမ်းပဲ ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ဖြစ်
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အခြေအနေ
နယူးဇီလန်မှာလိုပဲ သြစတြေးလျနိုင်ငံကို မတ်လ ၁၆ ရက်ကစပြီး ဝင်ရောက်လာသူတိုင်းဟာ ၁၄ ရက် သီးခြားခွဲနေရမယ် ဆိုပြီး အစိုးရက သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတခုမှာ တခြားတက်ရောက်လာသူ တချို့က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ တွေ့ရတဲ့အတွက် သမ္မတကိုလည်း စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ကူးစက်မှု မရှိဘူးလို့ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကေနဲ့ အိုင်ယာလန်တို့ကိုလည်း အမေရိကန်က ခရီးသွားကန့်သတ်လိုက်တဲ့ ကာလဟာ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ယူကေစံတော်ချိန် မနက် ၄ နာရီကနေ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာ လတ်တလော ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂ ဆ တိုးပြီး ၂၁ ယောက် အထိ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ယူကေအစိုးရက တင်းကြပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ထပ်ထုတ်ပေးဖို့ သိပ္ပံပညာရှင် ၂၀ဝ ကျော်က စာရေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မသွားမဖြစ်ကလွဲလို့ စပိန်ကို ခရီးမထွက်ဖို့လည်း အစိုးရက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ တလလောက် အတွင်းမှာ နေ့စဉ် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေသူ တွေ့ရှိမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်လာ
ကနေဒါနိုင်ငံကတော့ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်လာကြဖို့ တိုက်တွန်းချက် ထုတ်ထားပါတယ်။
ချီလီနိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ရပ်ထားတဲ့ အပျော်စီး ပင်လယ်ကူးသင်္ဘော ၂ စင်းထဲက တစင်းပေါ်က သက်ကြီးရွယ်အို ယူကေနိုင်ငံသားတဦး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း တွေ့ရှိအပြီးမှာ အဲဒီ ၂ စင်းလုံးပေါ်က လူ၁၃၀ဝ ကို ချီလီ အစိုးရက သီခြား ခွဲထားလိုက်ပါတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က စလို့ တစိတ်တပိုင်း ပိတ်ထားမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီး ကုန်တိုက်တွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်လို နေရာတွေကို ပိတ်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ လတ်တလော ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေသူ ၇၆ ယောက် တွေ့ခဲ့ပြီး တလလောက် အတွင်းမှာ နေ့စဉ် အလားတူ တွေ့ရှိမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မနှစ်က နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးသွားသူ အရေအတွက်က ပြည်ပက ကူးလာသူ အရေအတွက်ထက် နည်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပြင်သစ်နဲ့စပိန်မှာ အီတလီမှာလိုပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အရေးပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်